Fiqi: Nooca xabadda lagu dilay Almaas Elman, laba koox kaliya ayaa ku haysta Muqdisho – Hornafrik Media Network
Somali NewsTOOSHKA HORNAFRIKXULASHADA
By Liibaan Nuur	 On Nov 21, 2019
Axmed Macalin Fiqi oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo qoraal kooban ku soo daabacay bartiisa xiriirka bulshada ayaa waxa uu sheegay in xabada lagu dilay Almas Elman ay tahay mid Dhashiike, isla markaan ay magaalada ku heystaan oo kaliya AMISOM iyo ciidanka Dowladda.
Almas Elman Cali Axmed ayaa galinkii dambe ee shalay lagu dhex dilay xarunta Xalane oo lagu tiriyo goobaha amaankooda sida aadkaa loo ilaaliyo ee magaalada Muqdisho, waxaana ilaa hadda la cadeyn cida dishay Almas, wallow la sheegay inay baaritaano socdaan.
“Xabad aan sharqanteeda agagaarka laga maqal ayaa dishey marxuumad Almas Elman AUN, laakin waxaa la wada og-yahay qoriga dhashiikaha ah ee xabadiisu ay dishey gabadha waxaa magaalada MUQDISHO ku heysta oo kaliya ciidamada dawladda ka amarqaata iyo AMISOM” ayuu qoraalkiisa ku yiri Xildhibaan Fiqi.
Xildhibaanka ayaa sidoo kale qormadiisa ku adkeeyay in madaxda qaranka si aan leex-leexad laheyn looga doonayo inay u cadeyso cidii geysatay dilka gabadhaas, isagoo ka dalbaday in shacabka loo soo bandhigo natiijada baaritaanka lagu sameeyay arintaas.
“Haddaba waxaan ayadoon ka leexleexasho laheyn looga fadhiyaa Madaxda Villa Somalia In ciddii dambigaas geysatay sharciga la soo hortaago, ehelada marxuumadda iyo umadda Soomaaliyeedna lala hor yimaado baarista la sheegay in la samaynayo ka dib wax macquul ah oo lagu qanci karo” ayuu yiri Fiqi oo si weyn u mucaarada xukuumadda hadda talisa.
Jubaland oo qoraal kulul ka soo saartay ‘qabsashada’ ciidanka Itoobiya ee Gedo